Ndirini patinogona kutenga iyo Apple Watch 2 uye ichave yakaita sei? | Ndinobva mac
Ndirini patinogona kutenga iyo Apple Watch 2 uye ichave yakaita sei?
Iyi ndiyo mibvunzo isina kupindurwa inondinakidza pazvinhu zvese zvakakomberedza gwaro raGunyana, uye ndezvekuti iyo iPhone 7 haisi kuzotishamisa zvakanyanya uye tinosarudza kumirira rimwe gore. Iyo iPad Pro ichagadziriswa asi hazvizounze shanduko huru, uye maMacbook chinhu chakavanzika, kunyangwe paine kutaura kwekugadzirisazve uye inogona kuita OLED bhaira pane iyo keyboard yemakiyi ekushanda, chimwe chinhu chine hunyanzvi uye icho chatingade.
Chero nzira, kufarira kwangu kukuru kuri muApple Watch 2, chizvarwa chakamirirwa kwenguva refu icho zvino chinoita kunge chinozununguka, sezvo Apple yanga isingakwanise kuikurisa zvakanyanya sezvavaizoda nekuda kwematambudziko netekinoroji uye vagadziri. Iyi wachi nyowani ichataridzika sei ichatanga kutengeswa kune wese munhu?
1 Iyo Apple Watch 2 yakamirira
2 Izvo zvinhu zvinotakurwa neWatch 2
Iyo Apple Watch 2 yakamirira
Ndinoyeuka pakatanga kutengeswa modhi yekutanga, zvakange zvatotaurwa kuti yakanga isiri pfungwa yakanaka kuzvitenga nekuti vaizosunungura chizvarwa chitsva kugadzirisa bugs nekuchinatsiridza, chokwadi chakaitika ne iPhone neIpad. Zvakadaro Apple iri kumirira kusvika munaGunyana kuti itiratidze shanduko yechero chinhu chayo chaichoIzvo zvinoita sekunge zvisiri kuzove zvine hunyanzvi mukugadzirwa, sezvo John Ive ari bishi nemotokari nemamwe mapurojekiti akavanzika, pamwe neyekutanga-chizvarwa dhizaini ichiripo uye inogona kuchengetedzwa. Zvatinoda kuvandudza maficha uye hupenyu hwebhatiri.
Kana iyo Apple Watch 2 ikaratidzwa mune ino inokosha vanofanirwa kuivhura mumwedzi miviri inotevera, Krisimasi isati yatanga kutora iwo mazuva uye kusimudzira kutengesa zvakanyanya. Isu tinoziva kuti Apple haisi kunyanyisa mukutengesa gore rino uye neese ari mairi iPhone 7 uye wachi iyi vanogona kusimudza zviverengero zvakare uye kubatsira kambani kuwana mari yakawanda kupfuura nakare kose, kubvira kubudirira kwemidziyo uye zvigadzirwa zvaizowedzerwa uye zvakare yeaya masevhisi akadai seApple Music kana iCloud, iyo ine vakawanda uye vazhinji vashandisi (kusanganisira ini).
Zuva rekuburitswa kweApple Watch 2 inogona kuve munaNovember kana kunyangwe Zvita, kana vakaenderera nematambudziko ekugadzira, izvo panguva ino zvaisazove nhau dzakanaka, kana yechigadzirwa, kana yevashandisi kana yeApple.
Izvo zvinhu zvinotakurwa neWatch 2
Izvo zvinonzi Apple yakaramba ichisanganisira kuisa nharembozha muchizvarwa chino, asi nekuda kwezvikonzero zvehunyanzvi nebhatiri kwakasarudzwa kuidzosera kumberi. Iyo nguva yeApple Watch pakati pemakesi ingaderedzwa zvakanyanya uye ivo havasati vagadzirira kushandisa tekinoroji yakadaro nehunyanzvi mune wachi, uyezve hazvidi izvo izvozvi, sezvo wachi inonwa kubva kudhata uye kubatana kweiyo iPhone, kuwedzera kune Wifi.
Ichasimudzira zvishoma mukurwira kwayo kuve chakazvimirira chishandiso uye ichaedza kuwedzera simba rayo nema processor matsva, ayo anouya anobatsira kurwisa izvo zvisingagumi zvinomirira kana uchivhura mafomu. Ivo vanogona zvakare kuwedzera yemukati chengetedzo, chimwe chinhu chakabudirira kwazvo izvozvi kuti izvo zvinoshandiswa zvichave zvakananga paawa, uye kwete pane iyo iPhone.
Ehezve kumwe kugadziridza muhutano uye mumamita ayo anotakurika anotakura. Iyo inogona kuisa chimwe chinhu chine hukama nekurara uye kuchitevera, pamusoro pekutakura GPS chip, iyo vashandisi vanga vachikumbira kubvira chizvarwa chekutanga chakaunzwa. Mudziyo wakadai haugone kuenda usina GPS. Sechido chekudaira ndichati pamwe iyo skrini yakatetepa kutetepa muviri weApple Watch uye inogona zvakare kuuya neFaceTime kamera kufonera vhidhiyo, kunyange izvi zvingave zvisina basa uye nekukurumidza, zvinogona kupedza bhatiri rakawandisa zvakare .
Tichaona izvo Apple zvakatichengetera munaGunyana. Chinhu chakachengeteka ndechekuti tinogona kuzvitenga kuSpain pakati paGumiguru padyo neiyo iPhone 7 uye 7 pamwe, kunyangwe ichiri kungangodaro kunonoka zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ndirini patinogona kutenga iyo Apple Watch 2 uye ichave yakaita sei?
Dambarefu raFrank Ocean rave kuwanikwa chete paApple Music
Inorova Headphone Kukwidziridzwa Kunopera Nyamavhuvhu 5